Abacebisi ngeofisi yamazwe ngamazwe eNetherlands - Law & More
Iingcebiso ngeOfisi yoSapho
Phakathi kwabaxumi bethu ziintsapho zamashishini amaDatshi nezamazwe aphesheya, athe afumana impumelelo ebonakalayo kumashishini awo. Iintsapho ezinje zihlala zisenza kwaye zimisele, okanye ziceba ukwenza njalo, i-ofisi yeDatshi eyodwa okanye enye yosapho eyahlukeneyo yokuhlela imisebenzi yabo kunye notyalo-mali ngendlela ecacileyo nolawulwayo.
INXALENYE YENKONZO YONYANISO?
ISICELO SENKXASO YOMBUTHO
Law & More inceda abathengi kunye neeofisi zosapho ezineenkonzo zomthetho ezilungelelanisiweyo. Sidibanisa ulwazi kunye namava ethu njengamagqwetha abucala abaxhasi baseDatshi kunye nabacebisi ngerhafu kwimimandla yeDatshi yerhafu kunye nokucwangciswa kwepropathi, ukuthotyelwa irhafu yamaDatshi, imicimbi yearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye nokulandelelana kweshishini. Uncedo olunjalo lubonelelwa ngokusebenzisana neengcali kulawulo lotyalo-mali, ucwangciso lwezemali kunye nezobalo lwezinto zakudala osele unceda usapho oluthile. Amava ethu aqala kwimicimbi enxulumene nolwakhiwo lweofisi yosapho, ulawulo losapho, ulandelelwano kunye nokusonjululwa kwengxabano eNetherlands.
Sisebenzisana noochwephesha kwiinkalo ezinxulumene nobungcali esijoyina nabo kwiinzame zethu zokubonelela ngendlela edityanelweyo yemicimbi eyahlukeneyo yezomthetho kunye engekho engekho mthethweni, ethi idityaniswe ziintsapho zedatshi nezamazwe aphesheya kwezaseburhulumenteni kunye neeofisi zabo.
Sinceda abathengi ekusekweni kweeofisi zosapho eNetherlands. Siyaqhubekeka sisebenza neeofisi zosapho ezisekwe kwilizwe liphela kulwakhiwo lweeprojekthi zokuvuselelwa komhlaba kwamashishini osapho kunye namashishini. Okokugqibela sijonga ukusebenza kunye nolwakhiwo lweeofisi zosapho ezimiselweyo, ezifuna ingcebiso ekwandiseni nasekuphuculeni uluhlu lweenkonzo ezibonelelweyo.
Iqabane / iGqwetha
Iinkonzo ze Law & More
Yonke inkampani yahlukile. Ke, uyakufumana ingcebiso kwezomthetho ehambelana ngqo nenkampani yakho
Ngaba ufuna igqwetha okwethutyana? Nikeza ngenkxaso yomthetho eyoneleyo ku Law & More
Igqwetha lokufudukela kwelinye ilizwe
Sijongana nemicimbi enxulumene nokwamkelwa, indawo yokuhlala, ukugxothwa kunye nabaphambukeli
Wonke usomashishini kufuneka ajongane nomthetho wenkampani. Zilungiselele kakuhle oku.
Sitsalele umnxeba kule nombolo +31 (0) 40 369 06 80 okanye usithumelele i-imeyile: